musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda Hydro Dams: Nyowani Yekushanya Inosvika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda Tourism Board (UTB) yaita chibvumirano nechikamu chezvemagetsi nechinangwa chekusiyanisa zvigadzirwa zvekushanya zveKuenda kuUganda kupfuura zvinonyanya kushanyirwa nemhuka dzesango kuburikidza nekusaina Memorandum of Understanding (MOU) neUganda Electricity Generation Company Limited (UEGCL) kushambadza 600MW Karuma Hydro Power Dam uye 183MW Isimba Hydro Power Dams semidziyo yekushanya kwezvivakwa.
UTB ndeyekubatsira UEGL kurongedza uye kushambadzira akasiyana siyana akarongwa mapurojekiti uye zviitiko pamadhamu emagetsi.
Zviitiko zvekushanyirana uye zvigadzirwa zvinofanirwa kuvepo kushanya kwekudyara, zvikepe zvinofamba, hove dzemitambo, nzvimbo dzekugamuchira vaeni, uye zviyeuchidzo.
Iyo MOU yakasainwa munaGunyana 7, 2021, paIsimba Dam inotsigira kutyaira kweEGGCL kushandisa midziyo yayo mukusiyanisa bhizimusi ravo uye kusimudzira kugadzikana kwayo sekushushikana kuri kuwedzera.
“Iyi MOU inoratidza kutanga kwerwendo rwakakosha kuUganda. Kana ikaunzwa kune chibereko, kubudirira kubudirira kwe Karuma Hydro Power Project uye Isimba Hydro Power Project munzvimbo dzekushanyirwa ichawedzera kusiyanisa nzvimbo dzekushanya uye, nekudaro, zvinobatsira kuzvinangwa zvedu zvikuru, zvinowedzera kuwedzera huwandu (huwandu) uye kukosha (mibairo) yekushanya kuUganda uye nekuwedzera, dzimba dzekuUganda uye raramo kuburikidza kuumbwa kwemabasa uye kuwedzerwa kwemitero, ”akadaro Lilly Ajarova, Executive Director weUganda Tourism, pakusaina uku. Akatenda manejimendi eEGGCL nekusarudza kufarira kutashanya uye nekusvikira UTB kuti iumbe kubatana uku.
“Kupatsanurwa nekusimudzirwa kwezvigadzirwa zvekushanyirwa zvinopfuura zvekushanya kwemhuka dzesango zvinosanganisira pakati pezvimwe, zvechitendero, zvetsika, zvekudya (zvekudya) uye nekushanya kwezvivakwa iye zvino, kwakakosha zvikuru kwatiri sebazi uyezve seUSB. Ndokusaka, mune yedu Strategic Chirongwa 2020 / 21-2024 / 25, UTB yakaisa pamberi pekushandira pamwe nevaridzi venzvimbo dzekushanya, masangano akazvimirira nemamwe madhipatimendi eMinisitiri nemaAgency kugadzira uye kurongedza zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvekushanya kuti hurebese kureba kwekugara kunzvimbo '' akadaro Ajarova, kunyanya pamusika wepamba.
Dr. Eng. Harrison Mutikanga, achitaura akamiririra UEGCL, akati iyo MOU inoenderana nechirongwa cheUEGCL cheMakore mashanu eChirongwa cheChirongwa (2018 -2023) icho pakati pevamwe, chinotarisa pachinangwa chakakosha chekusimudzira chikamu chemabhizinesi.
Akaudza kuti kushandiswa kwemahombekombe emagetsi emagetsi sechigadzirwa chekushanya kuchaenda kure mukuvhura zvivakwa kugona kushanya muUganda. Izvi zvinovakirwa pachokwadi chekuti ipapo magetsi emagetsi emagetsi ane akasiyana maficha ari pamusoro nepasi pevhu. "Se UEGCL, tinovimbisa kuzvipira kuzere mukudyidzana," akadaro Mutikanga.
Tourism kunzvimbo dzemagetsi haizi nyowani sezvo izvi zvave kuratidzwa paTatu Gorges hydropower saiti muChina, Livingstone saiti muZambia, uye Niagara Falls hydropower saiti muCanada.
Hukama pakati pemapoka maviri aya, zvisinei, hausati hwave hwakasimba kwemakore gumi ekutanga ezana ramakumi maviri nemasere, apo Hurumende yeUganda yakatanga danho rine hukasha rekuwedzera simba remvura pamwe nesimba renyika zvichitevera kukundikana kuzadzikisa kudiwa kubva maindasitiri uye kuwedzera kwevanhu. Izvi zvakauya nemutengo wakakwira kune indasitiri yekushanya sezvo nzvimbo dzinoyevedza parwizi Nile dzakakurumbira nepasi rose rafting uye kayaking zvakabairwa muzita rebudiriro.
Pakazosvika 2007, World Bank yakanga yabhadharira chirongwa cheBujagali Hydropower, zvichikonzeresa kutsakatika kweyekutanga yegiredhi 5 rapids kuBujagali kudonha uye kudzinga Oracle yechinyakare yeFalls, Nabamba Budhagali.
Iyo Kalagala Offset nzvimbo yakagadzirwa, pakati peInternational Development Association (World Bank) neHurumende yeUganda. Chibvumirano chakaitwa kudzikisira kukuvara kwakakonzerwa nedhamu reBujagali uye chakataura kuti nzvimbo yakamisikidzwa haizofashukwe neimwe hydro chirongwa. Zvisinei, muna 2013 hurumende yakatsvaga imwe mari kubva kuExim Bank yekuChina yekupedzisa kuvaka dhamu remamiriyoni mazana mashanu nemakumi manomwe emadhora, kurasa chibvumirano ichi.
Ichokwadi, kugadzira magetsi kwaive kwakakosha mukusimudzira nekusimudzira kwemaindasitiri enyika, kunyange hazvo mutengo uri pa0.191 cents pachikamu chimwe chete chakaramba chiri pasi pekusvikwa neUganda yekumaruwa, tichifunga kuti mutoro wakapihwa mhuri. Chainyaradza veruzhinji ndechekuti bhiriji reIsimba, rakavakwa nekuda kwedamu, rave kurerutsa kufamba pakati pematunhu eKayunga neKamuli, richitsiva chikepe chemotokari chisina kuvimbika nekusimudzira kutengeserana nekushanya.
Nechekuzasi kwerwizi, iyo Isimba Dam ichangotumirwa parwizi Nile inoramba ichizivikanwa pamakwikwi emvura chena uye makwikwi epasi rose anosanganisira Nile Freestyle Festival iyo inokwezva kayaking fraternity kubva kuUSA, Russia, neSouth America pamwe neEurope, vazhinji vacho vakadzidzira paNire mukugadzirira makwikwi epasi rese emvura chena.
Sachigaro weTBB Honourable Daudi Migereko, ainakidza aive Gurukota rezveMagetsi pakukwirira kwedamu muna 2006, akataura pakusaina kuti MOU chimwe chikamu chehurongwa hwekudyidzana kweITB nemasangano anokosha ehuruzhinji, akazvimirira, uye asiri ehurongwa nemasangano basa rine chekuita nekushanya.
Muna 2019, hurumende yakagadzirisa zvirongwa zvekubvumidza chidzidzo chekuita pakuvaka dhamu -ma-megawati mazana matatu muMurchison Falls National Park kuburikidza neM / S Bonang Energy uye Power Ltd. kubva kuRepublic of South Africa neNorconsult neJSC Institute Hydro Project, kungoita bharaki pasi pekumanikidzwa neAssociation yeUganda Tour Operators (AUTO) uye Civil Society.
Ndinovimba, mataurirwo eUBB nemauto emagetsi achabhadhara, uye chibvumirano chisina kumira zvakanaka chinonamira; iyo pepa nzira inotaura neimwe nzira.